/Blog/Gallery/Ahoana no fiasan'ny Orlistat ho toy ny fatiantoka lanja?
Posted on 03 / 02 / 2020 by 阿斯劳 nanoratra tao Gallery.
Araka ny angona avy amin'ny World Review Review, dia laharana faha-12 maneran-tany i Etazonia noho ny hatavezan'ny mponina ao Etazonia. Ny The Center for Disease Control (CDC) dia tombatombana fa ny 36.9% ny olon-dehibe amerikana mihoatra ny 20 taona dia lehibe tokoa, mifototra amin'ny angon-drakitra voangona amin'ny taona 2016.
Ny antontan'isa ofisialy dia mampiseho fa 41.1% amin'ny vehivavy ary ny lehilahy 37.9% - na Amerikana mihoatra ny 160 tapitrisa aza, miady amin'ny hatavezivezy. Ny antontan'isa ankehitriny dia mampiseho ny fihenan'ny hatavezan'ny mponina amerikana tao anatin'ny telopolo taona lasa.
Mampalahelo fa tsy tsara lavitra ho an'ny tanora amerikanina ihany koa ny angona. Manodidina ny 15% amin'ireo tanora sy ankizy rehetra no matavy loatra na matavy loatra, izay avo telo heny raha oharina amin'ny taona 1980.
Araka ny angona avy amin'ny The State of Obesity, ny angona vao haingana avy amin'ny Rafitra fanaraha-maso momba ny risika momba ny fitondran-tena (BRFSS) dia mampiseho fa fanjakana sivy dia manana haavo be loatra mihoatra ny 35%. Ny Kansas, Florida, New Mexico, Utah, Missouri, Minnesota, ary New York dia samy nahita ny taham-pahavitrihana be loatra eo amin'ny lehibe sy ny ankizy eo anelanelan'ny taona 2017 sy 2018. (1,2)
Ka maninona i Etazonia no miatrika valan'aretina mihabetsaka amin'ny ankizy sy ny ankizy manerana ny firenena? Ny obesity dia misy rohy matanjaka amin'ny safidin'ny fomba fiaina ratsy sy ny fomba fanao amin'ny sakafo. Ny ankizy dia milalao eny ivelany noho ny tamin'ny 1980 tany ho any, miaraka amin'ny fandrosoana amin'ny teknolojia fampidirana lalao video sy endrika fialamboly hafa izay mahatonga ny ankizy ho saro-takarina.
Ny olon-dehibe dia manana tolotra fialam-boly sy serivisy sakafo azo alaina am-bavany. Ny fahafaham-po fanampiny rehetra eo amin'ny fiainantsika dia mitombo ny fanjifana be loatra amin'ny kaloria, ary tsy ampy fanatanjahan-tena mba handoro ny fihenan'ny angovo fanampiny.
Ny fihinanana kaloria be loatra amin'ny filanao angovo dia mitarika amin'ny vatana, mitahiry tanjaka mihoatra ny tavy. Safidy ratsy ho an'ny matavy loatra ny safidy ratsy amin'ny fiainana, ny sakafon-kaloria matevina misy gliosida sy tavy ratsy, ary tsy misy fanatanjahan-tena loatra. Ny fotoana fotsiny no ilaina.
AASraw no mpamatsy ny vovo-dronono volo-Orlistat mahomby.
Azafady tsindrio eto raha mila fampahalalana momba ny vidiny. Contact us
1. Inona ny Orlistat?
Ny fihoaram-pefy dia mametra ny kalitaon'ny fiainan'ny olona voakasik'izany. Na izany aza, na dia maro aza ny Amerikanina no mahatsapa fa ny fihenan-danja loatra dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalamany, saingy vitsy dia vitsy no manapa-kevitra ny hanao zavatra hampiatoana ny fandrosoany ho matavy loatra.
Ny ankamaroan'ny olona matavy be loatra sy matavy dia tsy manana fahalalana sy fifehezana ilaina hanatanterahana fanovana vatana na fisakafoanana mifehy ny kaloria. Ho an'ireo izay manomboka fiovana vatana, latsaky ny 5% no mitantana mba hahatratrarana ny lanjany.
Ny zava-misy dia ny fahaverezan'ny tavy amin'ny vatana be loatra rehefa be loatra ianao na matavy loatra dia fanamby toa vitsy no maharesy. Ny fanovana fahazarana fiainana, ny fanovana sakafo, ary ny fanombohana drafitra fanatanjahan-tena dia mitaky fanoloran-tena be ho an'ny olona matavy loatra.
Raha tsy misy ny fitarihana sy ny fanentanam-panahy, ny olona matavy dia manary ny antony manova ny vatany, ka mahatonga azy ireo ho lasa zatra manimba tena.
Ny fandrosoana amin'ny siansa momba ny sakafo nandritra ny 20 taona lasa dia namokatra zava-bita mahaliana sy mahaliana amin'ny vahaolana ara-panafody amin'ny fitantanana sy fanasitranana ny hatavezina. Ny "grail masina" amin'ny fikarohana pharma dia ny famoronana pilina mampihena ny lanjany izay mamela ny olona matavy hamerina ny vatany ho amin'ny BMI salama.
Mety hieritreritra ianao fa tsy misy mpitsabo aretin-tsaina na dokotera milaza aminao fa misy pilina mahomby amin'ny fihenan-danja noho ny hatavezina.
Orlistat, raha tsy izany dia fantatra amin'ny anarana marika hoe Alli sy Xenical, dia mety ho ilay zava-mahadomelina ny fihenan'ny fahagagana izay manome fahafaha-manao tombony amin'ny fahasalamana ny olon-dehibe.
Ny olona matavy loatra dia mety mividy Orlistat amin'ny latabatra amin'ny 60mg (Alli). Ny kinova 120mg (Xenical), dia mitaky dokotera amin'ny fividianana sy fampiasana. Misy dikanteny iraisana marobe hita an-tserasera koa.
Orlistat dia zava-mahadomelina natao hamenoana ny sakafon'olona sy ny programa fanatanjahan-tena. Noho izany, tsy azontsika atao ny miantso azy io hoe pilina mampihena ny fahagagana, satria mbola mitaky ny hampiasan'ny mpampiasa ezaka amin'ny sakafon'izy ireo sy ny fampiasan'izy ireo izany.
Na izany aza, ny tatitra nataon'ny mpampiasa dia milaza fa ny Orlistat dia fanafody mahomby tokoa amin'ny fanafainganana ny fihenan-danja rehefa ampiarahina amin'ny torolàlana momba ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena ho an'ny filan'ny olona matavy loatra.
Ireo olon-dehibe amin'ny taonany 18 taona dia mety hividy takelaka 60mg Orlistat eny amin'ny counter, raha toa izy ireo dia manana Index Mass Mass (BMI) 25 na mihoatra. Ireo olona matavy be loatra miaraka amin'ny BMI mihoatra ny 30 dia mety hitsidika ny dokoterany amin'ny fahazoana maka takelaka Ordétat 120mg mba hampiasaina miaraka amin'ny sakafo lanja mihena.
Ny dokotera dia mety hanaiky ny fampiasana ny dikan'ny 120mg amin'ny olona manana BMI ambany ka 27, raha miatrika olana ara-pahasalamana hafa izy ireo, toy ny diabeta na tosidra. Ireo olona mampiasa Orlistat eo ambany fanaraha-mason'ny mpitsabo matihanina ity dia mety mihatra amin'ny fiantohana ny sarany amin'ny fanafody.
Na izany aza, tsy ny fiantohana rehetra dia mety manarona ny fitsaboana. Mahazo mora ny mahita mpamatsy Orlistat an-tserasera, ary ny tari-dàlana momba ny vidin'ny Orlistat ho an'ireo mpivarotra an-tserasera dia miovaova, miankina amin'ny laza sy ny kalitao.
Ahoana ny fomba fiasan'i Orlistat?
Orlistat dia manakana ny fantson'ny GI tsy handratra ny tavy amin'ny sakafo izay hohaninao. Vokatr'izany, ny tavy tsy misy sakafo ao amin'ny sakafonao dia mandalo ny rafitry ny gastrointestinal anao, izay ametrahan'ny vatana azy amin'ny zavatra fecal.
Ny gliosida sy ny proteinina dia ahitana angovo 4-kaloria isaky ny grama. Na izany aza, ny grama matavy iray dia misy kaloria 9. Noho izany, ny hevitra ao ambadiky ny fampiasana Orlistat dia ny fisorohana ny olona matetitetika hampihena an'io menaka matavy mokazo io.
Matetika ny olona matavy dia mihinana sakafo matavy be, ary ny sakafo safidiny dia tsy salama. Amin'ny fameperana ny fihinanana kaloria sy ny fanovana ny sakafon'ny olona matavy loatra amin'ny safidy mahasalama, ny olona matavy loatra dia hanomboka hahita vokatra eo ho eo isan-kerinandro eo noho eo ny fiovan'ny vatany.
Na izany aza, ny olona be loatra dia mety handray ny fanoloran-tena hatramin'ny 3 ka hatramin'ny 5 taona hanovana ny fiovan'ny fisakafoanana, ny fanatanjahan-tena ary ny fomba fiainana, alohan'ny hiverenany amin'ny BMI mahasalama.
Ny fijanonana tsy miova amin'ny fiovan'ny lanjany be dia be dia sarotra amin'ny olombelona rehetra. Noho izany, ireo olona matavy be dia be afaka manampy ny sakafony sy ny programa fanazaran-tena amin'ny fampiasana Orlistat hanafainganana valiny.
2. Ekena ho azo antoka ve ny Orlistat ho fampiasa amin'ny FDA?
Tahaka ny zava-mahadomelina dia nanao famakafakana sy fitsapana nataon'ny FDA i Orlistat. Ny fankatoavan'ny Orlistat FDA dia tamin'ny taona 1999 tao amin'ny CAS Number 96829-58-2.
Ny FDA dia nanandrana ny kinova marika an'ny zava-mahadomelina nandritra ny fitsapana ara-pahasalamana nandritra ny taona 1999, nankato ny kinova Xenical ny fanafody mety ampiasaina miaraka amin'ny fitarihan'ny mpitsabo matihanina voaofana. Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa Xenical dia tsy misy afa-tsy amin'ny alàlan'ny fanafody.
Neken'ny FDA fa i Alli (60mg Orlistat) dia azo antoka amin'ny fampiasana olona mavesatra be loatra mihoatra ny 18 taona. Na izany aza, ny dikan'ny 60mg dia azo amidy amin'ny counter. Raha ny tiana OTC dia ampiasaina fotsiny miaraka amin'ny sakafo voafetra sy tsy dia matavy loatra, dia tsy misy porofo ofisialy omena torolàlana rehefa misy olona matavy loatra buy Orlistat amidy eny rehetra eny.
Ny FDA dia manara-maso ny tatitra rehetra misy fiantraikany ratsy ataon'ny mpampiasa Alli sy Xenical, ireo marika Orlistat misy marika. Nahazo fampandrenesana an'arivony ny masoivoho avy amin'ny mpampiasa momba ny fiantraikany amin'ny lafiny ratsy sy ny faharatsiana ratsy mitranga mandritra ny fampiasana fanafody.
Amin'ity tatitra ara-pahasalamana marobe ity dia mety hampatahotra ireo mpampiasa sasany mety tsy hampiditra izany ao anatin'ny fandaharana mampihena lanja. Fa ny zava-misy dia ny tsy fahampian'ny hetsika ara-pahasalamana amin'ny tatitra nataon'ny FDA amin'ny FDA dia ny ataon'i Alli sy Xenical ihany, fa tsy i Orlistat manokana.
Hatramin'izao, mbola tsy misy porofo ara-pitsaboana milaza fa tompon'andraikitra amin'ny tranga ratsy niainan'ny mpampiasa Alli sy Xenical i Orlistat. Tena azo atao tokoa fa ireo olana ireo dia mety avy amina singa iray hafa ampiasaina amin'ny famokarana fanafody.
Ny FDA dia manohy ny fanadihadiana momba ny voka-dratsiny ary ny olana amin'ny poizina manodidina ny fampiasana Alli sy Xenical. Na izany aza dia mbola tsy namoaka fanambarana momba ny fanafoanana ny fiarovana sy ny fankatoavan'ny fanafody.
Ny FDA dia manana ahiahy ihany koa amin'ny hoe mahazo tatitra amin'ny 1 amin'ny iray isaky ny folo ny tranga ratsy. Nanao maso ihany koa ny masoivoho momba ny fanapoizinan'ny Alli ny mpampiasa tamin'ny 2007.
Ny fitsapana dia nahitana ny famakafakana ny angon-drakitra mialoha ny klinika, klinika, post-marketing, ary ny fampiasana zava-mahadomelina mifandray amin'ny poizina maloto sy ratra mafy noho ny fampiasana ny fanafody marika Xenical. (3)
Ny valin'ny fandinihana dia nifarana fa tsy misy rohy ny Xenical amin'ny fananganana poizina maloto na ratra mafy.
Na izany aza, ny FDA dia namantatra tranga 12 tamin'ny famakafakana ny tsenan'ny tsena mifandray amin'ny ratra amin'ny atiny vokatry ny Xenical, ary ny iray miaraka amin'ny fampiasana Alli. Ny fandinihana fanampiny momba ny porofo dia mampiseho fa ny antony hafa miteraka, toy ny dehydration, ary ny off-label na ny fampiasana fanafody fanafody, dia mety hitarika ny antony mahatonga ny ratra mafy amin'ny aty amin'ireny tranga ireny. (4)
3. Orlistat ho toy ny fanafody fatiantoka mavesatra
Amin'ny manaraka mandeha eo amin'ny lalantsara famenony ao amin'ny GNC eo an-toerana ianao, dia jereo ny fizarana famoizana tavy. Hahita vokatra mavesatra am-polony am-polony amin'ny endrika hery sy pilina ianao. The Fanampiana amin'ny fahavoazana Orinasa miliara dolara ny orinasa, ary marika marobe no manandrana manjaka amin'ity habaka ity.
Zava-dehibe ny manamarika fa Orlistat dia fanafody mampihena lanja fa tsy famenon-danja. Raha mihinana famenon-tsakafo mavesatra loatra ianao, dia mety hiaina effets effet thermogenika kely toy ny tummy marary na fiakarana kely amin'ny stimulation sy ny mari-pana.
Na izany aza, ny fampiasa amin'ny fomba tsy marina na fanararaotana amin'ny pharmaceutika drugs, toy ny Orlistat, dia mety hiteraka voka-dratsy ratsy izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalamanao mandritra ny fotoana maharitra.
Miasa tsara ny Orlistat, ary mety hanapa-kevitra ny mpampiasa sasany hampiakatra ny protokolok'izy ireo hanatsarana ny valiny. Na izany aza, ity paikady ity dia azo antoka fa hampiditra ny mpampiasa amin'ny olana lehibe amin'ny fahasalamany. Ampiasao miaraka amin'ny fanaraha-maso ara-pahasalamana ny Orlistat, indrindra raha mampiasa ny endrika 120mg ianao.
A: Ahoana ny fomba hamoahana lanja raha maka Orlistat?
Rehefa fampiharana ny fampiasana Orlistat ho an'ny fatiantoka mavesatra, ny mpampiasa dia tsy maintsy manaraka ny torohevitra amin'ny dokotera mpitsabo, indrindra rehefa mampiasa endrika 120mg ny fanafody. Alohan'ny hanombohan'ny olon-droa ny programa mampihena lanja, dia mila manana fisainana tsara izy ireo mba hanatontosana fanovana vatana mahomby.
Ny olona mavesatra na matavy loatra dia mila mahatakatra fa ny fanafody dia tsy valin'ny olany. Ny vahaolana tokana amin'ny famoizana lanja maharitra lava dia amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny sakafo sy ny fomba fiaina ary ny fampidirana programa fanatanjahan-tena maharitra.
Raha tsy misy an'io fisainana io, ny olona matavy loatra na be loatra dia hanandrana hiankina amin'ny fampiasana tafahoatra ny fanafody rehefa tsy mahita ny valiny tadiaviny izy ireo. Ny fampiasana tafahoatra an'io zava-mahadomelina io dia mety hampisy fiantraikany mahery vaika izay mety hanimba ny fahasalaman'ny mpampiasa.
Rehefa mampiasa Orlistat amin'ny endriny rehetra dia azonao antoka fa manaraka ny torolàlana fatra voatanisa ao anaty fitoeran-javatra ianao, na avy amin'ny fivarotam-panafody manao fanafody. Orlistat dosage mety miovaova arakaraka ny BMI an'ny tsirairay. Na izany aza, aza mihinana fanafody maharitra ela kokoa noho ny voatondro, na voatanisa ao amin'ny fampidirana fonosana vokatra.
Ny olona matavy loatra sy be loatra dia afaka mampiasa Orlistat miaraka amin'ny sakafo manokana, ambany tavy, famerana kaloria. Rehefa mandrafitra ny drafitry ny sakafon'ilay olona izy ireo dia tokony hiantoka ny sakafo matavy fa tsy mihoatra ny 30% amin'ny kaloria totalin'ny sakafo rehetra ny tavy.
Ny olona matavy dia tsy maintsy manaraka ny sakafony sy ny drafitry ny fampihetseham-batany ary mampidina ny Orlistat araky ny torolalan'ny mpitsabo azy. Ny ankamaroan'ny protokolan'ny doka dia manome doka telo amin'ny fanafody mandritra ny andro.
Raha toa mandalo sakafo ny mpampiasa dia tokony hatsipy koa ny fatra Orlistat ilaina amin'izany sakafo izany koa.
Raha mandalo sakafo ianao na mihinana sakafo tsy misy matavy dia atambaro ny fatran'ny Orlistat amin'izany sakafo izany. Tokony hanomboka handinika tsara ny labels ara-tsakafo momba ny sakafo ny mpampiasa. Vakio amin'ny alàlan'ny lisitry ny fangaro sy ny sakafo mahavelona, ​​ary atoroy ny sakafo matavy be loatra.
Orlistat koa dia mety hanelingelina ny fidiran'ny otrikaina tsy misy rano ao amin'ny sakafonao. Noho izany, ny marary dia tokony hangataka ny dokoterany mba hanome soso-kevitra marika azon'izy ireo avelany mandritra ny fampiasana ny fanafody.
Ny mpampiasa dia tokony hanara-maso ny fatra amin'ny fitsaboana sy ny fampiasana ny fanafody. Orlistat dia zava-mahadomelina izay mety hitrandrahana script tsy ara-dalàna. Noho izany, olon-kafa mety hidoboka ao amin'ny fanafody raha tsy miraharaha ny fampiasanao ianao.
Mitondrà fanafody fanampiny na fanafody hafa farafahakeliny 2 ora alohan'ny fatran'ny Orlistat. Ity paikady fatra ity dia misakana ny fanehoan-kevitra ratsy amin'ny zava-mahadomelina hafa azonao ampiasaina. Raha eo amin'ny fitsaboana hafa dia azonao atao ny miresaka amin'ny dokotera alohan'ny hampiasana ny Orlistat.
B: Inona no tsy tokony hohalavirako raha mampiasa Orlistat?
Rehefa miresaka amin'ny dokotera momba ny fahasalamanao sy ny drafitra hataonao amin'ny fikapohana ny hatavezana ianao, dia ataovy azo antoka fa hiresaka momba ny olanao hafa rehetra koa ianao. Tokony ho fantatry ny dokotera ny fanafody rehetra alainao alohan'ny hanoratanany an'i Orlistat.
Ny fanafody sasany dia mety hiteraka contraindications amin'ny zava-mahadomelina hafa, ka miteraka fiantraikany ratsy amin'ny mpampiasa. Tsy maintsy ampahafantarinao amin'ny dokotera ny fampiasanao an'io fanafody manaraka io.
Fanafody amin'ny diabeta am-bava na fampiasana insuline
Ny fanafody mampihena ra toy ny warfarin (Coumadin)
Zava-dehibe ny manamarika fa tsy lisitr'ireo fanafody feno izay mety hiteraka fahasarotana amin'ny fampiasana Orlistat.
Manaova fandaharana miaraka amin'ny dokoteranao mba hiresaka momba ny fanafody fanafody, fanafody, ary vokatra OTC hafa izay ampiasainao izay mety hiteraka fifandrindrana rehefa mampiasa Orlistat.
Na inona na inona toe-javatra tokony mandray Orlistat nefa tsy mila torohevitra amin'ny matihanina aloha. Raha azo jerena mora foana ny doka 60mg ho an'ny fampiasana OTC, ny mpampiasa dia tokony mbola hijery ny matihanina amin'ny dokotera alohan'ny hanampiana azy amin'ny sakafo sy ny drafi-panatanjahan-tena.
Rehefa alaina amin'ny fatra avo na mandritra ny fotoana maharitra, ny Orlistat dia mety hiteraka olana lehibe amin'ny fahasalamana. Ireo olona izay mieritreritra fa mety ho tafahoatra any Orlistat dia tokony hiantso avy hatrany ny zotra fanampiana amin'ny poizina ary hangataka fiara mpamonjy voina.
Ny marary dia tokony hisoroka ny fisakafoanana Orlistat raha voan'ny allergy ny fanafody. Aza maka Orlistat raha sendra misy amin'ireto aretina ara-pitsaboana manaraka ireto ianao.
Aretim-piraisan'ny aretina malemy
Olana ao anaty vay
Ny diabeta karazana I na II
Ny aretina amin'ny sakafo toy ny anorexia na bulimia
Raha mampiasa fanafody mampihena ny lanjany na vokatra OTC amin'izao fotoana izao
4. Inona ny vokatra mety andrasana aminao amin'ny fampiasana Orlistat?
Zava-dehibe ho an'ny olona ny mahatakatra fa tsy misy izany antsoina hoe "zava-mahadomelina mampihena lanja izany." Raha ny fampiasana Orlistat miaraka amin'ny fandaharam-pandraharahana famerana kaloria sy fampihetseham-batana dia hanafaingana ny fihenan-danja amin'ny olona matavy loatra na be loatra, mila mametraka fanantenana azo antoka amin'ny fomba izy ireo.
Vokatry ny lisitra miovaova arakaraka ny olona sy ny olona, ​​ary angamba satria ny olona tsirairay dia manana metabolism sy vatana karazana tsy manam-paharoa. Na izany aza, azonao atao ny manantena ny fihenan'ny tavy amin'ny antonony, ary ny fampiasana ny zava-mahadomelina dia mety hanampy anao handany kilao vitsivitsy isan-kerinandro fa tsy amin'ny paikady sy fisakafoanana irery.
Na izany aza, raha manantena ny fahaverezan'ny tavy haingana dia tsy mitombina. Ny mety hitranga dia maharitra mandritra ny taona vitsivitsy ilay marary, na am-polony taona aza, mba hahatratrarana ny hataony ankehitriny. Noho izany, ny fiandrasana ny tavy dia ho levona mandritra ny alina, na rehefa afaka volana vitsivitsy dia hamela ilay mpampiasa hahatsapa ho rava sy diso fanantenana amin'ny valiny.
Ny mpitsabo dia mamaritra ny fihenan'ny lanjany ara-pahasalamana ho toy ny fihenan'ny lanjan'ny vatan'ny olona, ​​5% na mihoatra ny herintaona. Asehon'ny fanadihadiana fa mihoatra ny 40% ny Mpampiasa Orlistat tratrarina io tanjona io, raha toa ka manaraka ny torohevitra matihanina amin'ny dokotera sy ny mpitsabo otrikaina izy.
Ny fandinihana ihany koa dia mampiseho fa ireo olona nihinana sakafo voafetra amin'ny kaloria, niaraka tamin'ny fanatanjahan-tena tsy tapaka, ary ny fampiasana ny Orlistat, dia nahatratra 5.7-lbs mihoatra ny vondrona fanaraha-maso izay tsy nampiasa ny Orlistat. (5,6)
(1) Inona avy ireo tombony azo amin'ny fampiasana Orlistat?
Misy tombony lehibe hampiasa ny Orlistat ho ampahany amin'ny fandaharan'asa very lanja voalamina tsara sy manara-maso. Ny fanafody dia mahomby amin'ny fisorohana ny vatana tsy handevona tavy, ka amin'izany dia mampihena ny ampahany lehibe amin'ny totalin'ny kaloria masiran'ilay marary.
Na izany aza, na Orlistat dia fanampiana mahasoa amin'ny fihinanana lanja, ary miteraka vokatra miavaka, tsy azontsika atao ny manamarika fa tsy tokony hampiasa io zava-mahadomelina io ho toy ny sakantsakana ny olona. Ireo olona miankina amin'ny famandrihana na famenony ho vato fehizoro amin'ny fandaharam-potoan'izy ireo amin'ny fatiantoka mavesatra dia hiaina valiny tsy misy dikany.
Ny olona sasany dia tsy manisy fiovana amin'ny sakafony sy ny làlan'ny fanatanjahantena ary, miankina amin'ny Orlistat hanaovana ilay asa. Na izany aza, ireo olona ireo dia ho diso fanantenana amin'ny valim-bavany mavesatra.
Tombontsoa Orlistat programa mihena lanja izay manana rafitra voafaritra sy tanjona kendrena. Tsy azo inoana fa hanana fahalalana na antony manosika hamita irery ny fanovana ny vatany ilay marary.
Noho izany, ny fahazoana manara-penitra ara-pahasalamana sy mpampiofana azy, ary manaraka ny fandaharana amin'ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena dia tsy maintsy ilaina ho an'ny olona mikasa programa mampihena lanja.
Ny ankamaroan'ny olona matavy loatra sy matavy loatra dia mahatsapa fa miaina fihenan-danja be izy ireo mandritra ny tapa-bolana voalohany manomboka mihinana ara-pahasalamana sy manao fanatanjahan-tena - ary eo alohan'ny fampidirany fanafody na fanafody toy ny Orlistat.
Na izany aza, ny olona sasany dia mety miady mafy amin'ny fahaverezan'ny lanjany rehetra na dia manaraka fandaharana sakafo sy fanatanjahan-tena mety aza. Ny sasany dia mety hahita fa ny fivoaran'ny fivoaran'izy ireo dia mampiasa fomba voajanahary. Ireo olona ireo dia mety hahita fa ny Orlistat dia mahasoa azy ireo amin'ity toe-javatra ity, mamela azy ireo hanana fihenan-danja mavesatra mandritra ny fiovan'ny vatany.
(2) Inona avy ireo risika ateraky ny fampiasana lisitra?
Ny olona mandinika ny fampiasana Orlistat dia tokony handany fotoana handinihana ny lisitry ny voka-dratsin'ny Orlistat mifandraika amin'ny fampiasana ny fanafody mavesatra. Orlistat dia fanafody mahery vaika natao hampiasaina miaraka amin'ny sakafo fetra-kaloria voafaritra ho an'ny olona matavy iray amin'ny alàlan'ny fanjarian-tsakafo mahay.
Ny dikan-teny OTC amin'ny fanafody dia mety azo vidy amin'ny fividianana tsy misy mpanome, fa tsy tokony hisy olona mampiasa Orlistat raha tsy niresaka tamin'ny dokoterany taloha.
Ao amin'ny fitsapana momba ny klinika misy ny fitantanana ny Xenical amin'ny marary, ny 27% no namolavola ny am-bavony ao anaty akanjony, ny 24% -n'ny mpampiasa efa nahazo entona ary ny famafazana fecal, tsy nahatratra 22% ny mpampiasa nisedra ny tiana maika, ny 11% no nampitombo ny fidirany isan'ny fihenan-tsina, ary 8% niaina tsy fahitana.
Ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa, ny aretim-pivalanana dia fiantraikany mahazatra amin'ny fampiasana ny fanafody, indrindra raha vao manomboka ny fampiasana ny zava-mahadomelina amin'ny lanjany.
Ny fihetseham-po amin'ny alikaola dia tsy fahita firy, ary ny sasany amin'ireo fiantraikany mahazatra amin'ny mpampiasa izay niainana tao anatin'ny herinandro vitsivitsy amin'ny fampiasana Orlistat dia ahitana ireto manaraka ireto.
Hazo na menaka any anaty patalohao
Fatana misy menaka na misy menaka
Menaka volontsôkôlà na volomboasary ao anaty daboka
Gasiho miaraka amin'ny fanondrahana menaka
Lozy, fitrandrahana haingana, ary ny tsy fahafahan'ny mpampiasa mifehy ny hetsi-kibony
Mihamitombo ny haavon'ny hetsika tsipika
Ny lozabe, mandoa, fanaintainan'ny vavony, ny fivalanana, ary ny fanaintainana amin'ny tenda
Ny hasasarana sy malemy, ny gorodona miloko miora, ny urine maizina, ny fahazotoan-komana, ny fanaintainana na ny fisehoan'ny jaundice (ny mavo ny fotsy hoditra na ny hoditra)
Ny olana hafa tsy dia mahazatra ary misy ny marary rehefa maka ny Orlistat dia ahitana ireto manaraka ireto.
Olana amin'ny gums sy ny nify
Ny fivoaran'ny soritr'aretina mangatsiaka
Ny fivoaran'ny soritr'aretina flu-toy
Aretin-doha sy fanaintainan'ny lamosina
Malemy paika amin'ny hoditra hoditra
Ny mpampiasa dia tokony hahatsapa fa tsy lisitra feno izany amin'ny lafiny vokatra mety hitranga rehefa mampiasa Orlistat. Raha sendra vokatr'izany ianao na fanehoan-kevitra ratsy amin'ny fanafody, dia atorio any amin'ny FDA ny 1 -800-FDA-1088.
5. Inona no lazain'ny mpampiasa momba an'i Orlistat?
Ny fijerena ireo famerenana amin'ny Internet avy amin'ireo mpampiasa dia mitarika valiny isan-karazany, na ho an'ny sy manohitra ny fampiasana zava-mahadomelina. Famerenana ao amin'ny Orlistat hafa avy amin'ireo olona nahazo valiny mahavariana amin'ireo izay niaina vokatra ratsy indrindra.
Na izany aza, toa ny ankamaroan'ny tranga voakasik'ireo olona matavy loatra, na amin'ny BMI mihoatra ny 27 taona, dia manana traikefa tsara amin'ny zava-mahadomelina. Ireo valim-panadihadiana tsara rehetra hitanay momba ny fanafody lanjan'ny lanjany dia avy amin'ireo mpampiasa fampahafantarana izay miatrika fanovana vatana eo am-pelatanan'ny manampahaizana momba ny fitsaboana.
Noho izany, nanangana ny paikady hampihenana lanja azy ireo olona ireo. Nanakarama mpiasan-tsakafo ara-pahasalamana daholo izy rehetra, nanao fizahana fizahana isan-taona niaraka tamin'ny dokoterany, ary nifikitra tamin'ilay protocol dona natolotry ny dokotera mpitsabo azy.
Ity misy ohatra iray amin'ny valin'ny Orlistat tena misy an'izao tontolo izao izay hitanay tamin'ny Internet.
"Ron ny anarako, ary matavy loatra aho ka nanimba ny fiainako. Niala teo am-baravarankely ny fivezivezena ary niharatsy ny fahasalamako, dia nitady vonjy tamin'ny dokotera aho. Ny dokotera dia nampifandray ahy tamin'ny mpitsabo sakafo, ary azoko tsara ny zavatra ilaiko amin'ny kaloria mandritra ny andro.
Rehefa avy nisakafo tsara sy nihazakazaka 6 volana isan'andro aho dia nahita vokatra tsara, saingy nanomboka nihombo ny fandrosoako. Nanoro hevitra ny dokoterako fa andramo ny Xenical (Orlistat). Tsy dia nieritreritra izany firy aho, saingy nitohy ny fihenan'ny lanjako taorian'ny andro faharoa tamin'ny fampiasana fanafody.
Herintaona taty aoriana, ary mahatsiaro ho olona vaovao aho. Asakasako ny lanjan'ilay tanjoko ary mihena hatrany ny kilao. "
Ron Swanson, Jacksonville, FL, Etazonia.
Zava-dehibe ny manamarika fa tsy ny olona rehetra no hiaina an'io valiny io, fa ity dia mari-pahaizana tsara amin'ny valiny azonao antenaina rehefa mandeha tsara ny zava-drehetra.
Amin'ity ohatra ity, ny valiny Ron dia vokatra tsara indrindra, saingy tsy midika izany fa olon-kafa tsy afaka mamerina ny valiny mitovy ho azy ireo, raha toa ka manana fanaraha-maso ara-pitsaboana marina izy ireo.
6. Ireo fandraisana an-tanana lehibe amin'ny fampiasana Orlistat ho zava-mahadomelina amin'ny fihenan'ny lanjany
Loza manambana ny fahasalaman'ny Amerikanina eran-tany ny hatavezana. Miakatra ny vidin'ny fihenan-danja amin'ny olon-dehibe sy ny tanora ary ny ankizy, miaraka amin'ireo firenena atsimo sy atsinanan'i Etazonia izay voadonan'ny valan'aretina mihamitombo.
Ny hatavezana dia miteraka fivoaran'ny olana ara-pahasalamana marobe, toy ny diabeta, tosidra, ary aretim-po. Io toe-javatra io ihany koa dia ny fahafatesan'ny 18% an'ny Amerikana rehetra 40 taona ka hatramin'ny 85 taona.
Amerikanina maro no mitodika any amin'ny zava-mahadomelina sy fanafody famenon-tsakafo hanampy azy ireo hanafaingana ny programa fampihenan-tena. Na izany aza, maro amin'ireo olona ireo koa no tsy ampy ny manova ny fomba fiainany, ny sakafony ary ny fampihetseham-batany alohan'ny hidirany amin'ny fomba fihenan-danja hafa.
Mila mahatakatra ny Amerikanina fa tsy misy fomba fohy hanalana ny tavy amin'ny vatana. Ny fahazoana fahalalana ny fihinanana sakafo ara-dalàna sy ny fanatanjahan-tena dia zava-dehibe amin'ny famerana ny fifehezana ny lanjan'ny vatanao. Alohan'ny hidiranao amin'ny fampiasana zava-mahadomelina mety hampidi-doza dia tsara kokoa ny miantoka ny fihinananao sakafo tsara sy ny fanatanjahan-tena tsara aloha.
Eritrereto fotsiny ny fampiasana Orlistat rehefa avy miresaka amin'ny dokotera momba ny tanjonao hampihenana lanja. Haniraka anao amin'ny mpitsabo otrikaina iray ilaina amin'ny fisakafoanana arahin'asa ianao amin'ny dokotera.
Ireo olona izay manandrana programa mampihena lanja dia tsy maintsy miantoka fananganana ekipa manodidina azy ireo raha te hahita valiny. Ny dokotera, ny mpitsabo ara-pahasalamana, ny physiotherapist, ary ny mpampiofana manokana no mamorona ny ekipa tohananao mba hanomezana fotoana tsara indrindra handresena ireo sakantsakana amin'ny làlanao mba hahatratraranao ny tanjonao.
Ny Orlistat dia toy ny fametrahana solika jet amin'ny milina fampiasa tsara. Rehefa mifehy ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena ny marary, ny fametrahana fanafody mampihena lanja toy ny Orlistat dia afaka manafaingana ny valiny.
Alohan'ny hanapahany hevitra handray an'i Orlistat, ny marary dia tsy maintsy manatona mpitsabo amin'ny matihanina ara-pitsaboana mba hahitana raha mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fitsaboana izy ireo.
Rehefa mandinika ny valin'ny zavatra niainan'ny mpampiasa amin'ny Orlistat dia valiny mifangaro ny valiny. Na izany aza, toa ireo olona izay mandray Orlistat amin'ny torolàlana avy amin'ny dokotera sy manakarama ekipa mpanohana mety dia mahatratra ny vokatra tadiavin'izy ireo.
Etsy andaniny, misy olona maro manana traikefa mahatsiravina amin'ny fampiasana Orlistat. Noho io antony io dia tena zava-dehibe tokoa ho an'ny olona ny mandray Orlistat eo ambany fiahian'ny mpitsabo matihanina.
Orlistat dia manome olona matavy sy matavy amin'ny safidy FDA amin'ny safidy counter ho an'ny fampitomboana ny ezaka lanja enta-mavesatra.
Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa ny marary rehetra mampiasa zava-mahadomelina, mitaky fanabeazana momba ny fanovana hatrany ny fitondran-tena mandritra ny fampiasan'izy ireo ny zava-mahadomelina.
Anderson JW, Schwartz SM, Hauptman J, et al. Ny voka-piainana orkidratsy ambany amin'ny lanjan'ny vatana amin'ny olona mavesatra amin'ny olona mavesatra amin'ny olona mavesatra: ny 16 herinandro, ny fitahirizan-droa, ny fanadinana plasebo. Ann Pharmacother. 2006, 40 (10): 1717-1723
Smith SR, Stenlof KS, Greenway FL, et al. Orlistat 60 mg dia mampihena ny fihanaky ny adipose visceral: 24-herinandro efa voafandrika, fanadinana plasebo, fitsapana multicenter. Olana (Loharano Volafotsy). 2011, 19 (9): 1796-1803.
Ny "loharanon'ny fahatanorana": NAD + & NMN ho fanampiana
Powder Synephrine HCL - Famonoana menaka sy famenon-danja Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny pregabalin